Diso izany ataonao izany! | Martech Zone
Diso izany ataonao izany!
Alarobia 19, 2009 Alahady 24 aprily 2016 Chris Lucas
Amin'ny maha mpivarotra antsika dia fantatsika tanteraka fa sarotra ny manova ny fihetsiky ny olona. Iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra azonao andramana atao izy io. Izany no antony ananan'i Google, amin'izao fotoana izao, ny fahombiazan'ny fikarohana hatrany, satria efa zatra "Google it" ny olona rehefa mila mahita zavatra amin'ny Internet izy ireo.
Fantatro izany, nahaliana ahy ny isan'ny olona hitako tao amin'ny Twitter sy bilaogy izay milaza amin'ny hafa fa diso ny fampiasan'izy ireo ny Social Media. Ny tena nahasarika ahy indrindra dia ireo olona ireo na miasa consultant na amin'ny masoivoho, na PR, Marketing, na Media sosialy.
Te hanana tsiambaratelo momba ny fampivoarana ny haino aman-jery sosialy ianao ary manampy ireo orinasa hampivelatra ny orinasan-tserasera? Atsaharo ny filazanao amin'ny olona fa manao ratsy izy ireo ary manomboka miteny amin'ny olona ny fomba hahavitany tsara kokoa. Tsy misy te hilaza aminy fa diso izy ireo, te hahafantatra ny fomba hanatsarana ny orinasany izy ireo. Ity dia fomba mora hampitomboana ny orinasanao ary ahitanao ny fanararaotana ny fomba fanao amin'ny media sosialy amin'ny sehatra orinasa.
Mianatra ny fomba fampiasana ireo fitaovana ireo isika rehetra, manome hery ny olona ary mijery ny fihavanan'ny orinasanao.
Tags: disofitsipikalalànan'ny media sosialyratsytsy mety ny ataonao
Dingana 25 mankany amin'ny fahombiazana: fanatsarana ny motera fikarohana ary bilaogin'ny orinasa
Brody PR: Rahoviana ianao no handrehitra ny orinasanao mifandraika amin'ny daholobe
19 Aogositra 2009 amin'ny 4:06 PM
Manaiky aho .. Nanao lahatsoratra vao haingana mitondra ny lohateny hoe "Media sosialy mila mpitaiza aho?" Mahita tompona orinasa miha misimisy aho mieritreritra na manomboka mirotsaka amin'ny media sosialy saingy hitako fa misy tapaka kely. Ny sasany tsy mahalala na inona na inona ary ny hafa manambany ny fahafahan'ny haino aman-jery sosialy. Ho an'ny "EXPERTS" marobe dia milaza ho manam-pahaizana na valim-panantenan-tena tsy tratran'izy ireo mihitsy. Noho ny tsy fahampian'ny fahalalana sy fotoana hianarana dia amidy tsotra izao ireo tompona orinasa. Manaraka sy manaja ireo ao amin'ny media sosialy aho toy ny hoe mijery azy ireo ho mpanolo-tsaina ara-bola aho. Raha mbola tsy nametraka ara-bola ny mpanolo-tsaina ara-bola, ahoana no hataon'izy ireo manatona ahy.
Tena tiako ny hevitra momba ny bilaogiko http://yougonetwork.com/johnnie_firari/2009/08/so… Zavatra iray amin'ny fananana orinasa kely mbola amboariko sy iasako hanolo-tena azy. Misaotra.